Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.
PAC-Poly aluminom chloride
Enwere ike itinye flocculant n'ime ọdọ mmiri MBR akpụkpọ ahụ?
site admin na 21-11-22
Site na mgbakwunye nke polydimethyldiallylammonium chloride (PDMDAAC), polyaluminum chloride (PAC) na ihe mejupụtara flocculant nke abụọ na arụ ọrụ na-aga n'ihu nke membrane bioreactor (MBR), a nyochara ha iji belata MBR. Mmetụta nke imebi akpụkpọ ahụ. Nnwale ahụ tụrụ ch...
site admin na 21-11-16
N'ime ọgwụgwọ mmiri mkpofu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ibipụta na ịcha mmiri bụ otu n'ime mmiri mkpofu kacha sie ike ịgwọ. O nwere ihe mgbagwoju anya, uru chroma dị elu, nnukwu ntinye uche, ọ na-esikwa ike imebi. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha njọ na nke siri ike ịgwọ mmiri mkpofu ụlọ ọrụ ...
Otu esi achọpụta ụdị polyacrylamide bụ
Dị ka anyị niile maara, ụdị polyacrylamide dị iche iche nwere ụdị ọgwụgwọ nsị dị iche iche na mmetụta dị iche iche. Ya mere, polyacrylamide bụ ihe niile na-acha ọcha, kedu ka esi amata ihe nlereanya ya? Enwere ụzọ 4 dị mfe iji mata ọdịiche dị n'ụdị polyacrylamide: 1. Anyị niile maara na cationic polyacryla ...
Ngwọta maka nsogbu nkịtị nke polyacrylamide na sludge dewatering
Polyacrylamide flocculants na-arụ ọrụ nke ọma n'iwepu mmiri sludge na idozi nsị mmiri. Ụfọdụ ndị ahịa na-akọ na polyacrylamide pam na-eji sludge dewatering ga-enwe nsogbu ndị dị otú ahụ na ndị ọzọ. Taa, m ga-enyocha ọtụtụ nsogbu nkịtị maka onye ọ bụla. : 1. The flocculation mmetụta nke p...
Nyochaa ọganihu nyocha nke nchikota pac-pam
Xu Darong 1,2, Zhang Zhongzhi 2, Jiang Hao 1, Ma Zhigang 1 (1. Beijing Guoneng Zhongdian ike nchekwa na Environmental Protection Technology Co., Ltd., Beijing 100022; 2. China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249 ) Abstract: n'ọhịa nke mmiri mkpofu na mkpofu ihe fọdụrụ na-agwọ ọrịa ...
Mmiri siri ike China dị elu na-ewepụ Chlorine Fluoride dị arọ ọla sediments adịghị ọcha
Igwe dị arọ na-ewepụ ihe nnọchi anya CW-15 bụ ihe na-ejide ọla dị arọ na-adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi. Kemịkalụ a nwere ike ịmepụta ngwakọta kwụsiri ike nke nwere ọtụtụ ion metal monovalent na divalent n'ime mmiri mkpofu, dị ka: Fe2+, Ni2+, Pb2+, Cu2+, Ag+, Zn2+, Cd2+, Hg2+,Ti+ na Cr3+, wee rute ebumnuche iwepụ hea. ..
Ụlọ ọrụ ozugbo China Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride Dadmac
Ndewo, nke a bụ ndị na-emepụta kemịkalụ dị ọcha nke sitere na China, isi ihe anyị lekwasịrị anya bụ nchacha ncha mmiri. Ka m webata otu ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị-DADMAC. DADMAC bụ nnukwu ịdị ọcha, agbakọta, quaternary ammonium nnu na nnukwu ụgwọ njupụta cationic monomer. Ọdịdị ya bụ agba...
Ngwa maka Acrylamide Co-polymers (PAM)
site admin na 21-03-31
A na-eji PAM eme ihe n'ọtụtụ ebe na usoro gburugburu ebe obibi gụnyere: 1.dị ka viscosity enhancer na enhanced mmanụ mgbake (EOR) na nso nso a dị ka esemokwu reducer na nnukwu olu hydraulic fracturing (HVHF); 2.dị ka flocculant na mmiri ọgwụgwọ na sludge dewatering; 3. dị ka a...
Otu esi eji kemịkalụ ọgwụgwọ mmiri 1
site admin na 20-12-10
Otu esi eji mmiri ọgwụ kemịkalụ 1 Anyị na-eleba anya ugbu a n'ịgwọ mmiri n'efu mgbe mmetọ nke gburugburu ebe obibi na-akawanye njọ. Chemical ọgwụgwọ mmiri bụ ihe enyemaka ndị dị mkpa maka ihe eji agwọ mmiri nsị. Chemicals ndị a dị iche na ...
Otu esi eji kemịkalụ ọgwụgwọ mmiri 2
site admin na 20-11-02
Otu esi eji mmiri ọgwụ kemịkalụ 3 Ugbu a anyị na-eleba anya n'ịgwọ mmiri mkpofu mgbe mmetọ nke gburugburu ebe obibi na-akawanye njọ.Kemịkalụ ọgwụgwọ mmiri bụ ihe enyemaka ndị dị mkpa maka ihe eji agwọ mmiri nsị. Chemicals ndị a dị iche na ...